Nuxurka War-murtiyeedka Ay Soo Saareen Dhallinyarta Beel Weynta Garxajis - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Nuxurka War-murtiyeedka Ay Soo Saareen Dhallinyarta Beel Weynta Garxajis
Nuxurka War-murtiyeedka Ay Soo Saareen Dhallinyarta Beel Weynta West Burco Clan
Annaga oo ah dhallinyarada, aqoon yahanka iyo haldoorka beel weynta West Burco Clan, waxa aannu qoddobbo ka soo saarnay xaalladda siyaasadeed ee dalka Somaliland.
Waxa aannu si buuxda u taageersanahay madax banaanida iyo midnimada dalkeenna Somaliland.
Waxa aannu si buuxda utaageersanahay war-murtiyeedkii beel weynta West Burco Clan soo saartay 10-kii-Jan-2022-kii.
Waxa aannu si buuxda u taagersanahay go’aan kasta oo ay qaataan axsaabta mucaaradka ahi ee ay kaga soo horjeedaan dastuur jebinta, xeer jebinta iyo khalkhal gelinta siyaasadda, amniga iyo midnimada Somaliland.
Waxa aannu si buuxda u cadaynaynaa in cidda keliya ee meteli karta kuna hadli karta afka beesha ay tahay Guddida Guud ee West Burco Clan ee loogu doortay gacan libaax 2018kii.
Waxa aannu u soo jeedinaynaa in aan maxkamadda dastuuriga ahi qayb ka noqon muranada siyaasadda lana dhawro madax banaanideeda.
Waxa aannu si buuxda u taageeraynaa in doorashada madaxtooyada JSL lagu qabto xiligeeda
Waxa is xasuusin mudan in Madaxweyne Muuse ku yimid doorasho sidaana madaxweyne ugu noqday intii codka siisay iyo intii ka codaysayba. Dastuurka ayuu Muuse Biixi Cabdi
madaxweyne ugu noqday tiradii badnayd ee ka codaysay ilaa haddana ugu yahay. Dastuurkii madaxweynaha ka dhigay haddii uu ka leexdo isaga ayaa kalsoonidii iska lumiyey mana jirto wax kale oo uu madaxweyne ku noqon karaa.
Waxa aannu ugu baaqeynaa shacbiga Somaliland in ay ilaashadaan midnimada, wadajirka iyo horumarkooda, isla markaana ay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka iyo xeerarka dalka.